FAAHFAAHIN: Socdaalka John Kerry ee Muqdisho – Radio Muqdisho
Xogahayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa kulamo kula leh magaalada Muqdisho, masuuliyiinta dowladda Soomaaliya, maddaxda maamullada gobollada iyo wakiillo ka socda bulshada rayidka.
Madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra’iisul wasare Cumar Cabdirashiid ayuu la kulmay Mr. Kerry, ayadoo sidoo kale uu jiray kulan guud oo ay madaxda maamullada gobolladu ay ka qeyb galeen.
Arrimaha ammaanka oo ay ku jirto la dagaallanka argagixisada iyo hiigsiga 2016-ka ayaa ka mid ahaa waxyaabihii laga wada hadlay sida ay sheegayaan saraakiil ka tirsan dowladda.
John Kerry ayaa dhawaan shir jaraa’id ku qaban doona magaalada Muqdisho isagoo uga warbixin doona socdaalkiisa Muqdisho.
Dhawaan ayaan idiin soo gudbin doonnaa faahfaahin dheeraad ah oo la xiriirta socdaalka John Kerry hadduu Alle idmo.
Duqa Muqdisho Iyo Xildhibaanno Ka Tirsan Baarlamaanka oo Booqday Dhismaha Xarunta Dhexe ee D/hoose Offico Governo “Sawirro”